Real Madrid oo heshiis hordhac ah la gaartay ciyaaryahanka Bayern Munich David Alaba
Home Horyaalka Germalka Real Madrid oo heshiis hordhac ah la gaartay ciyaaryahanka Bayern Munich David...
Xiddiga Bayern Munich David Alaba ayaa lagu soo waramayaa inuu ku biiri doono Real Madrid xagaaga isagoo ah wakiil xor ah ka dib markii la sheegay inuu heshiis horudhac ah la qaatay Los Blancos.
Heshiiska ayaa la filayaa in la saxiixo isla marka uu xiddigan boosaska badan buuxin doono tijaabada caafimaadka.
Alaba ayaa la rumeysan yahay inuu diiday dalabyo badan oo qandaraas kordhin ah oo uga yimid Bayern Munich, waxaana lagu wadaa inuu ka dhabeeyo riyadiisa ah inuu u ciyaaro Real Madrid.
Sida laga soo xigtay warbixinnadii ugu dambeeyay ee ka soo baxa The Guardian , David Alaba ayaa lagu wadaa inuu soo gabagabeeyo 12 sano oo qurux badan oo uu la joogay Bayern Munich.. Waxaa lagu soo waramayaa inuu heshiis horudhac ah la gaaray Real Madrid kaasoo mushaarkiisa ka heli doona 230,000 (£ 204,000) isbuucii.
Qandaraaska waxaa la fahamsan yahay inuu yahay mid muddo dheer ah (afar sano ah), saxafiga reer Talyaani ee lagu kalsoon yahay ee caanka ah, Fabrizio Romano, ayaa isna sidaas oo kale xaqiijiyay.
David Alaba wuxuu ku soo biiray akadeemiyada Bayern Munich sanadkii 2008, isla markiiba waxaa loo dallacsiiyay kooxda koowaad. Wuxuu kulankiisii ​​ugu horreeyay saftay bishii Febraayo 2010, isagoo noqday ciyaaryahankii ugu da’da yaraa ee abid kooxda ka soo muuqday isagoo jira 17 sano, toddobo bilood iyo siddeed maalmood. Tan iyo xilli ciyaareedkii 2011-12, 28 jirkaan wuxuu ahaa mid aan looga maarmin kooxda weyn ee Jarmalka. In kasta oo uu ugu horreynba ahaa daafac, wuxuu ka ciyaaray khadka dhexe iyo sidoo kale baalasha.
Previous articleCiyaaryahanka qadka dhexe uga ciyaara kooxda Chelsea Jorginho oo doonaya inuu sii joogo Stamford Bridge
Next articleArsenal oo isha ku heysa inay u dhaqaaqdo ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Portugal